Ahoana ny fomba tsara indrindra hananganana backlinks, sa mety hividy azy ireo?
Mazava ho azy fa ny fomba tsara indrindra hananganana rindran-damina dia ny mandray azy ireo ara-boajanahary sy ara-boajanahary. Mandritra izany fotoana izany, mbola mety miezaka ihany koa ianao mividy azy ireo amin'ny tranonkala avo lenta sy manerantany. Saingy ianao dia mila mahafantatra izay tena vidin'ny fividianana rindran-damina. Eny ary, tsy ilaina ny milaza fa ny fifandraisana mendrika amin'ny PR, PA, ary DA dia tsy tonga amin'ny vidiny mora - openvz vps cheap. Noho izany, ohatrinona no azon'izy ireo atao, raha kely indrindra?
Indrisy fa tsy misy politika ara-pricing marina - ny zavatra rehetra dia miankina amin'ny mpamatsy azy. Ohatra, raha mandrehitra blôgy ianao, ny fomba tsara indrindra hanamboarana rindranasa dia mametraka izany amin'ny tompon'andraikitry ny tompony sasany, ka tsy maintsy ampandoavina vola fotsiny ianao. Raha jerena ny tranonkala fototra rehetra izay manome ny rohy fananganana rindrambaiko, ny tolotra nataony matetika dia nalaina avy eo amin'ny $ 25 isaky ny rohy mankany $ 100 na ambony. Saingy eto dia miditra amin'ny fifamoivoizana mamirapiratra isika - tsy misy olona milaza fa mivarotra rindran-damina izy. Nahoana? Fa satria io no fomba tsotra indrindra ho an'ny Google hikorontana amin'ny rehetra - ireo mpivarotra tsy manana zo ireo, ary ireo mpanjifany mahonena. Midika izany fa raha mandinika ny politika fikarohana amin'izao fotoana izao ianao, dia afaka mora "mankafy" ny fametrahana tranonkala midy, ary koa ny fahefam-pananana voajanahary. Indraindray, tompon-tranonkalan'ny tranonkala dia mety mahatsikaritra ny rohy malemy, mba hahatonga ny zava-drehetra hiafara amin'ny fanesorana tanteraka amin'ny valin'ny fikarohana. Izany no antony hikatsahana ny fomba tsara indrindra hananganana backlinks, angamba efa noraisinao ny olana.
Ny tsara indrindra dia ny fomba tsara indrindra hananganana backlinks dia manao izany fa tsy mametraka ny tranonkalanao amin'ny loza mety hitranga mba hahazoana sazy miharo amin'ny Google. Ary tsy handoa vola betsaka isika, sa tsy izany? Raha azonao tsara ny fandrahonana ary mbola vonona ny hifindra, dia misy soso-kevitra vitsivitsy mety hanampy anao amin'izany:
Afaka mandray soa avy amin'ny vondron'olona voavidim-bola ianao, satria misy maro ireo tolotra karazana fividianana ao amin'ny tranonkala. Na izany aza, raha manana fotoana ampy ianao - nahoana ianao no tokony handoa vola? Raha toa ianao ka mahay manoratra lahatsoratra momba ny votoatin-kalitao, dia afaka manararaotra ny sasany amin'ireo mpilatsaka ho fidina any amin'ny orinasanao ianao ary mampifandray azy ireo - tsy mila mandoa vola. Vao avy manapa-kevitra ianao raha mandoa vola handefa hafatra, na hanao izany irery.
Ny tambajotran'ny SAPE dia mety ho lasa vahaolana tsara hividianana rindran-damina amin'ny tranokalanao mandritra ny volana iray, indrindra fa avy amin'ny sehatra tena izy. Saingy tonga ny fampitandremana - raha jerena fa tranokala be loatra ao anatin'ity tambajotra ity no nopihana na nampiasaina tsy ara-dalàna (i. f. , eny fa na dia tsy mampahafantatra ny tompony tena izy aza) dia ataovy izay hiheveranao ny momba ny tena izy. Manana fanaraha-maso indroa isaky ny firotsahana hofidiana hividianana rohy any ivelany.
Ny fifampiraharahana amin'ireo mpitoraka blaogy malaza sy azo itokisana dia mety ny fomba tsara indrindra hananganana rindran-damina, farafaharatsiny na tsy dia azo antoka loatra. Ny zavatra dia azonao atao ny mahita mpitoraka bilaogy marobe mihazakazaka ny tetik'izy ireo ao amin'ny fonosanao. Tsy ilaina ny milaza fa tsy saro-kenatra izy ireo amin'ny famenoana ampahibemaso ny asany, ary matetika izy ireo dia manomboka amin'ny zandary 100 eo ho eo. Na izany na tsy izany, resaka momba ny raharaham-barotra, sa tsy izany?